VAHAOLANA FAMERENANA ASETA - World Trade Exchange
Mividiana fananana tsy manam-bola
Mahazo miverina 95% CASH BACK
Hampitombo ny vola miditra amin'ny 100X
Vidio izao, aza mandoa mihitsy
Vahaolana famadihana orinasa
Fanakalozana Default Default
Manaova ROI 10,000% ao anatin'ny 90 andro
Fakan-kevitra amin'ny telefaona
Varotra azo antoka mandritra ny 24 ora
Vahaolana fanarenana ny fananana
Trosa varotra amin'ny zanabola 0%
Programme fiarovana ny vola miditra
Ahenao ny vidin'ny fividianana 95%
Fiarovana amin'ny fampiasam-bola
Fifanakalozana Default Default Credit
Ahenao ny vidin'ny 90%
Avereno ny findramam-bola ratsy mandritra ny 24 ora
Amidio ny fananana ao anaty 24 ora
Aloavy amin'ny trosa ny andramena
Hampitombo ny vola miditra amin'ny 100X ao anatin'ny 30 andro
TRANSFORM FANASITRANANA ASETSY AMIN'NY CASH ao anatin'ny 24 ora
Ity no tsara kokoa ataontsika
OLANA ANAO ASETA VOAFITRA
Manana fananana maro ny orinasanao. Amin'ny fotoana rehetra, dia tsy mahatratra ny sandam-bolany rehetra izy rehetra. Mety tsy ho ilaina aminao intsony ny fananana iray. Mety manana fananana be loatra ianao, toy ny fitaovana amin'ny renivohitra na fananana tsy ilainao intsony, na fanatontosana miadana miadana izay ilainao hialana amin'ny talantalana, entam-barotra tsy mahasoa, trano mihoampampana, orinasam-pandraharahana tsy stratejika, tompon'andraikitra amin'ny karazana rehetra, trosa tsy ilaina na fananana tsy dia misy lanjany sy ketraka izay tsy mahavita na manome ROI azo ekena.
Na inona na inona endrika, ny fananana dia mety manana lanjany mety mihoatra ny vidin'ny tsena. Ny fivarotana ny fananana amin'ny sandan'ny tsena ankehitriny dia midika fa tsy maintsy manoratra fatiantoka ara-bola na alaotra ianao.
INONA NO ATAONAO RAHA TSY METY HANAIKY VOLA VOLA AMIN'NY FIVAROTANA ASETSIKA VOAFITRA?
Araka ny fomban-drazana dia azonao atao ny mihazona izany, manantena fa ho afaka hampiasa azy io ianao na hivarotra azy amin'ny vidiny lafo kokoa amin'ny ho avy. Na, azonao atao ny mivarotra azy na mamono azy io ankehitriny amin'ny vidiny mihena ary manoratra fatiantoka ara-bola na alaina. Rehefa manafoana ireo fananana ireo ny orinasa dia matetika no tsy tsapan'izy ireo afa-tsy 10 ka hatramin'ny 40% amin'ny sandan'ny boky. Raha tokony hanafoana ireo fananana ireo ho an'ny denaria amin'ny dolara ianao dia afaka mahatsapa hatramin'ny 100% ny sandany feno amin'ny alalany WTE.
NY LALANA TSARA TSARA ATAO TRANSFORM ASETSY NAMORINA AMIN'NY CASH AMIN'NY VALIM-PAMASINANA 3X SADY 24 ora.
miaraka WTEVahaolana fanarenana Asset, azonao atao ny manatratra 100% fanarenana fananana amin'ny fivarotana ny fanananao WTE amin'ny sandan'ny ambongadiny tany am-boalohany fa tsy ny sandan'ny liquidation, raha ny entam-barotra na sanda matetika dia avo 2-3 heny noho ny sandan'ny tsena amin'izao fotoana izao, amin'ny raharaham-barotra na trano. Avy eo, ampiasao ny vola sy ny varotra ara-barotra, na atambatra avy amin'izany fahazoana izany, hividianana izay ilainao – na ny dokam-barotra, ny entana sy ny serivisy, ny sponsorship, na ny fandaniam-bolan'ny orinasa hafa efa voa tety mialoha.
FAMINTINANA WTE VAHAOLANA FAMERENANA ASSET
WTE manampy ny mpanjifa hamerina ny sandan'ny boky feno amin'ny fananany amin'ny fividianana ny fananana amin'ny vidiny ambongadiny tany am-boalohany fa tsy ny sandan-drakitra, raha ny entana, na vola mazàna 2-3 heny noho ny sandan'ny tsena amin'izao fotoana izao, raha ny entam-barotra na trano.
OHATRA # 1.
ASSET $ 785M VOAVITRA AO AMIN'NY 24 HORIA VIA WTE
Ny iray amin'ireo mpanjifanay (orinasa 500 harena) dia nanana tahiry be loatra izay vola mitentina 785 tapitrisa dolara, ary nahatratra 350 tapitrisa dolara monja ny tolotra azon'izy ireo. Tsy te handray fatiantoka $ 435 tapitrisa izy ireo ka nampiditra ny serivisy WTE hamerina ny sandan'ny fananana rehetra. WTE nandoa azy ireo ny vola mitentina $ 785 tapitrisa ao anatin'ny 24 ora ho an'ny tahiry ho takalon'ny fametrahan'izy ireo ampahany efa voafaritra amin'ny fandaniana ho avy amin'ny alalànay.
OHATRA # 2.
$ 567M $ PORTFOLIO TENA MISY REHETRA TANANA 24 VIA VIA WTE
Ny iray amin'ireo tombam-bidin'ny portfolio-n'ny orinasa sy mpanjifanay dia ketraka mafy noho ny harinkarena nianjera noho ny valanaretina coronavirus. Tsy nilaina intsony ny tranobe misy biraon'ny birao fananan'izy ireo. Nisy sanda boky mitentina $ 567 tapitrisa, saingy tsy hitan'izy ireo ny mpividy hividy azy mihoatra ny $ 200 tapitrisa amin'ny tsena ankehitriny. Ny fananana tsy dia nahomby dia nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fikorianan'ny vola sy ny teti-bolany. WTE nividy ny fananan'ny mpanjifa tamin'ny sandan'ny boky 567 tapitrisa dolara tany am-boalohany, ka namela azy ireo hisoroka fatiantoka 367 tapitrisa dolara mifanaraka aminy ary hamidy.
OHATRA # 3.
2.53 $ $ ASAN'NY ASETA BEBE TANORA TANANA 24 VIA WTE
Ny mpanjifanay dia orinasa angovo iraisam-pirenena miaraka amina asa any amin'ny firenena 180 mahery. Mba hanatsarana ny fahombiazany sy hiteraka renivohitra hampiroborobo ny orinasa fototra, dia nanangana ny serivisy i orinasa WTE hivarotra ireo fananana ambiny marobe ao anatin'izany ny fitaovam-pitrandrahana, ny solika ary ny fanaka ao amin'ny birao. WTE nandoa azy ireo ny $ 2.53 miliara feno ao anatin'ny 24 ora ho an'ny ambim-bidy ho takalon'ny fametrahan'izy ireo ampahany efa voafaritra amin'ny fandaniana ho avy amin'ny alalànay.
Karazana fifanakalozana fananana
Misy rafitra telo ifanarahana ifanakalozana ara-barotra mahomby:
1. Credit varotra: Ny mpanjifanay dia mivarotra ny fananany ho an'ny fandoavana trosa arahin'antoka amin'ny fividianana amin'ny ho avy WTE.
2. Vola: Ny sasany WTEIreo mpanjifany dia aleony mandray vola toy ny fandoavam-bola amin'ny fifanakalozana fananana. Amin'ity scenario ity WTE manome vola fotsiny ho toy ny fandoavam-bola hividianana vola vaovao, hamatsy vola amin'ny fandaniam-bola na hanatsara ny fikorianan'ny vola. Amin'ny fifanakalozana vola ihany, ny mpanjifa dia mivarotra fananana amin'ny varotra mahazatra avo roa heny na telo heny ny sandan'ny tsena ary mahazo avy hatrany ny vola azo avy eo. WTE lasa fikambanana ara-bola hafa ho an'ny mpanjifa. Ho setrin'izany, ny mpanjifa dia nanao fifanarahana hividy haino aman-jery, entana ary / na serivisy voafaritra WTE.
3. Fampifangaroana ny varotra varotra sy ny vola: Amin'ny tranga sasany, ny fifanarahana tsara indrindra dia ny fampifangaroana ny trosa varotra sy ny vola. WTE miasa akaiky amin'ireo mpanjifanay mba hahatakatra ny filàna manokana sy ny zavatra mahaliana azy ireo, ary avy eo manangana drafitra mahomby sy mahomby indrindra hiatrehana azy ireo.
100% FANDAMARAM-bola VIA VIA TANANA TRANSAKO NY FANANANAN-TRANO
Ny fifanakalozana Asset Recovery dia mety hovolavolaina mba hampidirina vola, fantatra amin'ny hoe fifanakalozana Asset Recovery. Ny fifanakalozana ara-bola amin'ny fifanakalozana Asset Recovery dia fifanakalozana vola misy vola sy adidy mifandraika amin'izany.
Ireto ny singa ao amin'ny fifanakalozana Asset Recovery ara-bola voarindra:
WTE mandoa vola amin'ny orinasa iray ho takalon'ny (i) fananan'ny orinasa toy ny varotra, ny trosa, ny entam-barotra, ny trano, sns. sy (ii) ny fifanarahan'ny orinasa hividy vola tanteraka amin'ny haino aman-jery, entana ary / na serivisy (fandaniana efa nomanina sy novinavinaina) tamin'ny WTE (amin'ny teny ara-barotra mitovy amin'izay nety ho nataon'ny orinasa raha tsy izany); ary / na farafaharatsiny farafaharatsiny, mandoa fandoavam-potoana tsy misy fepetra (izany hoe, raha toa ka tsy vita amin'ny ambaratonga nifanarahana ny fividianana).
Ny orinasa ary WTE manaiky fa ampahany voafaritra amin'ny WTEIreo faktiora dia hotondroina ho “volan'ny varotra”, izay ny vola aloany amin'ny fandoavam-bola manaraka.
Rehefa mividy ny orinasa amin'ny alàlan'ny WTE amin'ny vola mitovy amin'ny vola lanin'ny orinasa raha tsy izany, ny sandan'ny varotra dia mandoa mialoha ny fandoavam-bola manaraka. Raha tsy izany, ny orinasa dia takiana amin'ny fandoavana vola mandoa.
WTE mahazo ny zon'ny orinasa hanome ny zony handray sy hanangona ny habetsahan'ny varotra ary ny fandoavam-bola s amin'ny andrim-bola ho takalon'ny vola izay ampiasaina hamatsiana ny fandoavam-bola etsy ambony amin'ny orinasa.
Mampiavaka ny famatsiam-bola voarindra WTE Fifanakalozana Asset Recovery dia ny fandraisan'ny orinasa vola mihoatra ny sandan'ny tsena ara-barotra amin'ny fananana manokana ho takalon'ny fananana sy ny adidy tsy misy fepetra hanaovana fandaniam-bola mialoha sy nomanina. WTE.
Ampidino ireto fampisehoana PDF sy PPT ireto mba hahalalana bebe kokoa
NY FOMBA HANOMPOTRANAY ASETSY SY INVENTORIANA MAFANA AVY AMIN'NY BUSINESSES PPT
Ohatra iray amin'ny fomba fividiananay harena sy fitahirizana
FAMPIANARANA TRANO # 1: $ 130M INVENTORIANA VOAJALO ao anatin'ny 24 ora
tranga fandalinana 2: ASSETS $ 1.8B lafo amidy 24 ora
FOMBA FANAVOTANA NY INVENTORO REHETRA REHETRA 24 ora
NY FOMBA HANOMPON'NY ASETSY SY INVENTORIANA FANAMPINY
Namidy fananana mitentina 43.5 tapitrisa dolara ao anatin'ny 24 ora
“Ny ankamaroan'ny mpivarotra ankehitriny dia hanaiky ahy fa ny fihenan'ny toe-karena dia misy fiantraikany amin'ny fifanarahana trano sy trano nefa ny fomba nanampian'ny Trade Exchange ahy hivarotra trano mitentina 43.5 tapitrisa dolara ao anatin'ny 24 ora dia zavatra tsy haiko ny manazava azy. Asa tsara! ”
Scottie Hitchman – LA. California
Namidy vokatra vy mitentina 29 tapitrisa dolara tao anatin'ny 24 ora
“Serivisy mahatalanjona tokoa ity. Ny orinasako dia afaka nivarotra vokatra vy 29 tapitrisa $ tao anatin'ny 24 ora tamin'ny alàlan'ny sehatra fifanakalozana varotra. Avy amin'ny firaketana anay, ity no haingana indrindra nampiasainay tamin'ireo serivisy mitovy amin'izany. Tena mamporisika an'ity aho. ”
Voasoratra feno 3 taona mialoha ny hotely
“Manolotra ny tolotra omenao aho noho ny fanampiana izay nahatonga ny fivarotana ny trano fandraisam-bahininay rehetra tao anatin'ny 3 taona manaraka tao anatin'ny 24 ora. Feno fankasitrahana tokoa aho. ”
Fitaovana fibre optika mitentina 12.3 tapitrisa dolara amidy ao anatin'ny 24 ora
“Tsara be ny asa ataonareo eto. Ny Fitaovana Optikantsika rehetra izay mitentina 12.3 tapitrisa dolara dia lafo avokoa ao anatin'ny 24 ora ary faly aho mizara ny zavatra niainako. Misaotra. ”
HOTEL 5-STAR INCREASED REVENUE BY 100X TSY MISY TRESOA.
Trano fandraisam-bahiny misy kintana 5 no nampitombo ny vola azony tamin'ny varotra 100X ary nahazo vola 640M $ ao anatin'ny 24 ora nefa tsy nampiantrano vahiny vaovao mandritra ny fihidiana COVID-19.
$ 1.3B VAROTRA NY INVENTORIANA FANAMARINANA VOLA AMIN'NY 24 ora tsy misy doka.
Mpanamboatra vokatra indostrialy iray namidy ny tahiry mihoatra ny $ 1.3B ao anatin'ny 24 ora WTE tsy misy marketing na dokam-barotra misy vokatra.
BANKAROTRA VOA-TRANOM-PANJAKANA NO NANDROSO $ 2.4B INDRINDRA VOLA AMIN'NY SORATRA BOKY FENO ISIKA 24 ANDRO.
Banky ara-barotra iray dia nahazo indram-bola indroa mitentina 2.4 miliara $ amin'ny sanda boky feno ao anatin'ny 24 ora WTE.
ORINASA MPANAO TANANA MAMPIASA AZY NY FAMPANDROSOANA DIA 5,500 87% ARY VOLA BUSINESS NAORINA NY XNUMX%
Orinasa mpamokatra sahirana dia nampitombo ny vola miditra 5,500 30% tao anatin'ny 87 andro, nefa tsy nandany vola tamin'ny marketing. Ary koa, ny orinasa dia nampihena ny vola mivoaka ho an'ny fandaniam-bola XNUMX% raha mampitombo ny fividianana isam-bolana.
Ity serivisy ity dia ho an'ny mpikambana ihany!
Kitiho eto raha hahazo tombony bebe kokoa
Kitiho eto raha hiaraka WTE
World Trade Exchange (WTE) manome ny olona, ​​orinasa, governemanta ary andrim-panjakana maro karazana serivisy sy vokatra ilain'izy ireo hahatratrarana tanjona tsy azo tanterahina ary ny vokatra azo amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainany.
Telephone: + 1 855-674-0080
Tombontsoa - Famintinana
Tombony - Fampahalalana bebe kokoa
Ny drafitry ny mpikambana
Banky nomerika nomerika
Orinasa manao lisansa
WTE Fizarana raharaham-barotra
40 Fahafahana orinasa